I-15 YEEKHRIM EZILUNGILEYO ZOKUGUGA EZIBANDAYO KUNYE NEESERUMS KUHLAHLO-LWABIWO MALI LWANGO-2021 - UBUHLE
I-15 yeeKhrimu zokuLwa nokuDala eziGqwesileyo kunye neeSerum zokulwa imibimbi, ngokweDermatologists
UHolubenko NataliiaImifanekiso kaGetty
Ukunyanga imigca emihle kunye nemibimbi akufuneki ukuba uye kugqirha wezonyango. Rhoqo usebenzisa iimveliso ezichasene nokwaluphala, ezinje ngeekhrim zasebusuku okanye izithambiso zamehlo , Ungenza umahluko wokwenyani kwindlela ulusu lwakho olujongeka ngayo kwaye uziva ngayo, kwaye zininzi ezibalaseleyo phaya ezingadingi kugunyaziso (okanye zibiza imali eninzi).
Kukho iindidi ezimbini zeemveliso phaya: ezo ziyanyanga kwaye zithintele imibimbi, kunye nezinye ezinciphisa ukubonakala kwazo, utshilo uDermatologist wasePennsylvania osekwe ebhodini. U-Erum Ilyas, uMD .
Udidi lokuqala lweemveliso ziqulathe izithako ezichasene nokuguga ezisemthethweni (cinga: ukujonga kwakhona ).
Oko akutsho ukuba kufuneka uluphephe udidi lokugqibela. Ezi mveliso zisebenza ngenjongo yokubonelela ngeziphumo 'ezikhawulezayo', ezilunge ngokugqibeleleyo xa ufuna nje into eza kukwenza ubonakale ungcono kumsitho, utshilo uGqirha Ilyas.
Okukwintsusa: Yazi into oyifunayo kwizithambiso zakho zokuguga ngaphambi kokukhupha isipaji sakho. Ukuba ukuyo ixesha elide kwaye ufuna ikhrim eshwabeneyo eya kuhlala ikunye nawe, kukho iimpawu ezininzi ekufuneka ujonge kuzo xa ujikeleza.
Ungayikhetha njani eyona cream ilungileyo yokuguga imibimbi okanye i-serum
Skena ilebheli: Oogqirha besikhumba esithethe nabo bancomela iimveliso eziqulathe ezi zinto zilandelayo:
Ii-retinoids ( Iziphumo zevithamini A. Ukukhuthaza ukubuyiswa kweseli, ukukhuthaza ukuveliswa kwe-collagen, kunye nokunceda ukuphuma kwesikhumba.
Iipeptides sesinye isitya esibalulekileyo esilwa nokuguga esinceda ukulungisa umonakalo wolusu.
Antioxidants Njengeevithamini C no-E zinceda ekulweni ii-radicals zasimahla (iimolekyuli ezingazinzanga ezinokwenza umonakalo omkhulu kwiiseli zakho).
I-Hyaluronic acid, iiseramikhi, ibhatha yeshea kunye nezinye ii-hydrators zinokunyusa kwaye zitshixe ukufuma, okuya kuthi kuncede ekunciphiseni iimpembelelo ezicaphukisayo zezinto ezichasene nokuguga.
Yazi uhlobo lolusu lwakho: Kulabo banayo ulusu olunamafutha okanye uhlala kwiindawo ezinemozulu efumileyo, ukhilimu onobunzima obunepropathi yokuthintela ukuthintela isikhumba ukuba singasindwa kwaye sikhazimle, utsho UJoel Schlessinger, MD , Omaha-based-board-certified dermatologist kunye ne-cosmetic surgeon. Kwelinye icala, ukuba umntu unesikhumba esomileyo okanye uhlala kwindawo eyomileyo, ebandayo, ukhilimu otyebileyo ulunge ngakumbi kwirejimeni yabo.
Inqaku kwiimvakalelo: Ukuba ulusu lwakho lucaphuka msinya, cinga ngokujonga izithambiso ezichasene nokuguga eziqulathiweyo bakuchiol endaweni ye-retinol. Inempembelelo efanayo ne-retinol ngokwezihloko, kodwa ayicaphukisi kakhulu kuba ikwayi-arhente echasayo, utshilo uGqirha Ilyas. Ezinye izinto ezinokubangela ukucaphukisa zibandakanya iziqholo, idayi eyenziweyo, kunye ioyile yekhokhonathi okanye ibhotolo yekoko, enokuvala ii-pores kwaye ibangele ukuphuma.
Khangela iipakethe eziphambili: Izithako ezifana ivithamin C , I-retinol, kunye neepeptides zinokungazinzi kwaye zonakalise xa ziveliswe ngumoya okanye ukukhanya, ke naziphi na iimveliso ezinazo kufuneka zipakishwe kwiityhubhu ezimnyama ezimnyama, ngokukhethekileyo ngeempompo ezixineneyo zomoya, utshilo uLela Lankerani, DO, ugqirha wesikhumba oqinisekisiweyo I-Westlake Dermatology eAustin, eTexas.
umgca wololongo olungcono kulusu olugugayo
Kodwa ukuhluza kuzo zonke iimveliso ezichasene nokuguga ukuze ufumane eyona ilungele wena kunokuba nzima. Apha, iingcali zeekram kunye neeserum zincoma uninzi.
amazon.com$ 16.22 THENGA NGOKU
I-Roc Retinol Correxion Cream Deep Wrinkle Night Cream
Le mveliso ine-retinol efunekayo yokunyanga nokukhusela imibimbi , kunye nezixhobo ezisebenzayo zokuhambisa amanzi ukunciphisa ukucaphuka okunokufumana uninzi lweemveliso eziqukethe i-retinol, utshilo uGqirha Ilyas. Ayinayo ioyile, ayinayo i-noncomogenic, kwaye iphantsi kwe- $ 20.
amazon.com $ 13.99 ngexabiso$ 6.58 (53% icinyiwe) THENGA NGOKU
IL'Oreal yokuvuselela iCicacream
Ukuba ulusu lwakho luthanda ukuva (kwaye ufuna into efikelelekayo), le khrimu iqulethe ingwe yengwe yokunceda ukuzola nokulungisa isithintelo solusu , kunye ne-pro retinol ukomeleza ulusu olunzulu, utsho UJoshua Drafman, MD , umlawuli wophando lwezithambiso kunye nonyango kwiklinikhi yezilwanyana kwiZiko Lonyango laseSinayi kwisiXeko saseNew York.
amazon.com$ 18.49 THENGA NGOKU
I-Olay Regenerist encinci yokuCoca ikrimu
Le cream iqulethe hyaluronic acid ukutyeba kunye nehydrate, iiamino-peptides zokuqinisa ulusu, kunye ne-niacinamide (aka vitamin B3), iyeza elinamandla Unceda ukuphucula ukubonakala kwama-pores kunye nobunzima Utshilo uDermatologist waseNew York City UDebra Jaliman, MD Umbhali we Imigaqo yoLusu .
ulta.com$ 27.99 THENGA NGOKU
I-Neutrogena ekhawulezayo yokulungisa imibimbi ebusuku
Le yimveliso ye-retinol enamandla esiza nokuzisa iiseli zolusu ezintsha ngaphezulu, ngelixa ukukhuthaza ukukhula kwe-collagen entsha ngokuhamba kwexesha , utsho udermatologist oqinisekiswe yibhodi UTsippora Shainhouse, MD . Yomelele ngokwaneleyo ukuba iyakucaphukisa, nangona kunjalo, ke qala ngokufaka umaleko omncinci wobusuku obubini ngeveki kwaye unyuke kancinci njengoko unyamezelekile.
elungec.com$ 97.00 THENGA NGOKU
Ngale khrimu, awudingi ukuba nexhala lokuba ingaba iya kuyo kuphela okanye hayi ncedisa ngokukhukhumala okanye uphucule nje iinyawo zecrow, kuba iyayenza yonke into, utshilo uGqirha Schlessinger. Ifomula yayo isebenzisa izinto ezinamandla okukhulisa ukuhambisa kakuhle nokuqinisa indawo yamehlo Ngelixa icaffeine iphucula ukubonakala kokudumba kunye nezangqa ezimnyama.
amazon.com$ 99.97 THENGA NGOKU
I-Naturopathica Argan kunye neRetinol Wrinkle yokulungisa iCream Night
Oku yi imveliso entle oyisebenzisayo ukuba unolusu olubuthathaka kwaye bafuna i-retinol, utshilo uGqirha Ilyas. Ngelixa ezinye izifundo zifunekayo ukuvavanya izibonelelo zeargan, iziphumo bezithembisile. Okona kuncinci, ihambisa ulusu ngokufanelekileyo ukukhulisa Izibonelelo zeretinol kwaye unciphise ukucaphuka okunokubakho ekusetyenzisweni kwayo, utshilo.
amazon.com $ 14.99 ngexabiso$ 12.26 (18% icinyiwe) THENGA NGOKU
I-Differin Adapalene Gel 0.1% Unyango lwamaBala
Le derm ndiyithandayo kuphela ligunya lokumisela amandla (i-adapalene) i-OTC ekhoyo , kwaye inyanga yonke into ukusuka induna ukuya kumbala kumbimbi. Faka isicelo se amafutha okuthambisa ngaphezulu kuba isebenza njengonyango olungakumbi. Ukuba ufumana ukucaphuka, sebenzisa i-moisturizer yakho ngaphantsi ukubonelela ngesithintelo.
amazon.com THENGA NGOKU
I-Serad ekhawulezayo yobudala beSerum yokulungisa
Ukujongana ne amabala amabala okanye amabala elanga? Le serum iyakunceda ukuqaqambisa umbala wakho njengoko ithintela ukwakheka kombala kwikamva, utshilo u-dermatologist oqinisekisiweyo webhodi eseManhattan UEmmanuel Loucas, MD Yitshike iye kumxube wayo we-vitamin C ene-antioxidant etyebileyo kunye nehydroquinone ekhanyisa ulusu.
elungec.com$ 88.00 THENGA NGOKU
I-NeoStrata yokuQinisekisa ukuThintela ukuGuga kweNeck Cream
Intamo yakho yenye yeendawo zokuqala zomzimba wakho ukubonisa iimpawu zokwaluphala. Le cream cream firms nge trifecta ekhethekileyo yezithako, ethi ukunceda ukuqinisa ulusu ngokwandisa imveliso ye-collagen, ukukhupha ukutshabalalisa amabala amnyama, kunye ne-hydrate nge-vitamin E kunye nebhotela ye-shea.
amazon.comIidola ezingama-33.90 THENGA NGOKU
I-CeraVe Skin yokuhlaziya iCream Night
Izithako zokuthambisa unokufikelela kwiziphumo zeemveliso ezibiza kakhulu , utsho uGqirha Jaliman. Iqulethe ii-ceramides kunye ne-hyaluronic acid, iyenza i-hydrator egqwesileyo enceda ukunciphisa ukubonakala kwesikhumba, ngelixa i-niacinamide inceda nokuba ithoni yolusu. Kukuqulunqwa kokukhanya okungazukuvala i-pores (kwaye kulula kakhulu kwisipaji).
sephora.com$ 55.00 THENGA NGOKU
OLEHENRIKSEN Ubumnandi bokuKhanya kweRetin-Alt yokulala iCrème
Le cream yile eyenziwe nge-bakuchiol, enye indawo esekwe kwisityalo ehambisa izibonelelo ezifanayo kodwa enobuntu eluswini, utsho uGqirha Ilyas. Ikwagxilwe ekukhutsheni i-alpha-hydroxy acids (AHAs) kunye ne-edelweiss stem cell, ekugqibeleni inceda ulusu lwakho lulwe imigca emihle, imibimbi, kunye amabala amnyama ngelixa uphucula ukuqina.
elungec.com$ 111.00 THENGA NGOKU
I-PCA yoLusu olunzulu lokuCoca uNyango i-0.5% ye-Retinol emsulwa
Xa kufikwa kwi-retinol, andilalanisi, utsho UMona Gohara, MD , usekela-mongameli Umbutho wabasetyhini kwiDermatologic kunye nelungu le Uthintelo IBhodi yokuHlola yezoNyango. Ndiyathanda ukuba nesayensi (ndiyazi ukuba kuvavanyiwe ukwakha i-collagen), ipesenti elungileyo (ubuncinci i-0.5%), kunye nokukwazi ukuyisebenzisa rhoqo ngaphandle kokucaphuka. Xa ndifumana imveliso enazo zonke ezo zinto, ndinamathela kuyo. Kungenxa yoko le nto wakuxhasayo oku kukhethwa kweeMbasa zoBuhle zika-2020.
elungec.com$ 140.00 THENGA NGOKU
ICaudalie INKULUMBUSO YOKUGQIBELA ICream Cream
Le cream ithoba kwaye inyibilikise ulusu ngelixa isilwa neempawu zokuguga , utsho UHeidi Waldorf, MD , Unjingalwazi onxulumene neklinikhi yesikhumba kwiIcahn School of Medicine kwiNtaba yeSinayi, ngenxa yobuninzi be-antioxidants (njengeevithamini C no-E), iipeptides, niacinamide , Ibhotolo ye shea, kunye ne hyaluronic acid.
elungec.com$ 166.00 THENGA NGOKU
UlusuCeuticals Phloretin CF
IPhloretin yeyona vithamin C ndiyithandayo serum antioxidant ukunceda ukukhusela ekulungiseni umonakalo omkhulu wasimahla, inyathelo eliphambili kwinkqubo yolusu yemihla ngemihla, utsho UShari Marchbein, MD , ugqirha wesikhumba oqinisekisiweyo kwiDowntown Dermatology kwisiXeko saseNew York. Inokukunceda ukunciphisa amabala ansundu, nditsho ulusu ithoni, kwaye ikhusele ekonakaleni kwelanga okungaphezulu. Uyaphawula ukuba zilungile kuzo zonke iintlobo zolusu, kodwa ngakumbi abo bathambisa ioyile okanye amaqhakuva.
amazon.com$ 178.00 THENGA NGOKU
UlusuMedica HA5 Ukuhlaziya iHydrator
IHyaluronic acid, ubunzima bepeptide, kunye nevithamini E zoba ukufuma okuvela emoyeni kwaye uyihambise kulusu lwakho ukuya kuthi ga kwiiyure ezisibhozo emva kwesicelo , URamya Kollipara, MD, ugqirha wesikhumba oqinisekisiweyo webhodi e I-Westlake Dermatology eTexas usixelele ngaphambili . Ilungile kwimigca emihle kwaye isebenza phantse kwangoko.
Ungalufumana njani okuninzi kwizithambiso zakho zokuguga kunye neeseramu
Uluhlu ngendlela eyiyo: Ufuna iimveliso zakho zincedisane, zingasebenzi ngokuchasene. Ngaphandle kokuba kuboniswe ngenye indlela, khumbula ukusebenzisa izithambiso ezichasene nokwaluphala emva zonke ezinye isikhumba-ngaphandle kweyakho i-sunscreen yemihla ngemihla , utsho uGqirha Schlessinger. Ukufaka ukhilimu ngaphambi kwejel okanye i-serum, umzekelo, kunokubathintela ekungeneni kakuhle eluswini.
Qinisekisa ukuba izithako ziyahambelana: Uninzi lwethu lweemveliso ezingqonge kuba sicinga ukuba oku kuyakwandisa izinto ezisebenzayo eziza kunceda ulusu lwethu, xa enyanisweni, sinokuthi siziphelise ngokudibanisa izinto ezingqubanayo-kunye neerinoids ngumzekelo olungileyo woku.
I-Retinoids zezinye zezona zinto zingqinwayo ekukhetheni ukuguga, kodwa zihlala zicinywa zii-alpha hydroxy acid kunye ne-benzoyl peroxide, utsho UHadley King, MD , kwiklinikhi yokufundisa ngezesikhumba kwi-Weill Medical College yeYunivesithi yaseCornell. Ke ukuba ubeka iimveliso kwaye enye ine-AHA kwaye enye iqulethe i-retinoid, ngekhe uzuze kwi-retinoid kwaphela. (Baye bathotywa kukuvezwa lilanga, yiyo loo nto kufunyanwa ukuba iikhrim zasebusuku .)
Ukukhupha: Uoyile kunye neeseli zolusu olufileyo zinokuvala ii-pores kwaye ziphazamise ukungena kwemveliso, utshilo uGqirha Schlessinger, ocebisa ukusebenzisa exfoliator kanye ngeveki ukuqinisekisa ukuba ubeka amanqaku kuzo zonke iikhrimu ezichasene nokwaluphala.
Gcina iimveliso zakho ngokufanelekileyo: Ukusebenza kweemveliso ezichasene nokuguga kuyonakaliswa xa ungagcini iimveliso zakho kwindawo efanelekileyo, utshilo uGqirha Lankerani. Iimveliso ezinezithako ezisebenzayo, ezinje nge-retinol kunye nevithamin C, kufuneka zigcinwe kwindawo emnyama, epholileyo ukunciphisa ukuthotywa kwezithako ezisebenzayo.
Linda: Ngelixa ixesha elifunekayo ukubona iziphumo ezibonakalayo lihluka ukusuka kwimveliso ukuya kwimveliso, ndincoma ukulinda iiveki ezili-12 ukubona iziphumo uninzi lwezinto zokulwa ukuguga, ucebisa uGqirha Schlessinger.
indlela yokusebenzisa ioyile yekhokhonathi kulusu
444 ithetha ingelosi